Wararka - Mitsubishi LCD shaashadaha ayaa joojinaya wax soo saarka sanadka 2022, Kyocera ayaa noqday badalka ugu weyn ee shaashadaha Mitsubishi
OLED (Debecsan oo Adag)
Noocyada IPS-TFT LCD
MUUQAALADA IPS-TFT LCD LAGU SAMEEYAY BAANKA
Moodooyinka TN-TFT LCD
Moodooyinka TN-TFT LCD LAGU DHIIBAYO BAANKA
KUNA SHAQO GUDDIGA DARWADAHA
Mitsubishi LCD screens waxay joojin doontaa wax soo saarka sanadka 2022, Kyocera wuxuu noqdaa bedelka ugu weyn ee shaashadaha Mitsubishi
Waxaa jira noocyo badan oo shaashadaha LCD ee warshadaha Japan ah. Waqtigan xaadirka ah, noocyada yar-yar iyo noocyada kala duwan ee suuqa ayaa badanaa ah Kyocera LCD screens iyo Mitsubishi LCD screens. Mitsubishi wuxuu ku dhawaaqay inuu ka baxayo LCD warshadaha sanadka 2022, sidaa darteed Kyocera waxay noqotay warshada kaliya ee Japan. Moodooyinka badankood ee shaashadaha Kyocera waxay si toos ah u beddeli karaan shaashadaha Mitsubishi. Maanta, aan ka hadalno farqiga u dhexeeya labada shaashad ee LCD-da warshadaha.
Shaashadda LCD ee Mitsubishi: Cabbirkiisu inta badan waa 3.5 inji illaa 19 inji. Dhammaan taxanaha shaashadaha LCD waxay leeyihiin astaamo warshadeed: Dareenka birta culus, waayo-aragnimada xagal-ballaadhan ee ballaadhan, iftiin aad u sarreeya, iswaafajin deggan, heerkul ballaadhan oo ballaadhan iyo astaamo anti-gariirka, iyo sidoo kale shaashad taabasho leh awood isku dhafan iska caabin. Wareegga cusbooneysiinta ee shaashadda guud ee shaashadda LCD waa in ka badan 5 sano. Kadib kor u qaadista waxqabadka taxanaha midaysan sida 8.4-inch S (800 * 600) xallinta shaashadda LCD, cabbirka aperture-ka isma beddeli doono, sidaa darteed looma baahna in laga walwalo cabbirka badeecada oo loo baahan yahay in dib loo naqshadeeyo. , Waxay noqon doontaa oo kaliya in la filaayo in waxqabadka. Mitsubishi LCD shaashadaha waa shaashado asal ah oo Jabbaan ah. Dhammaan moodooyinka ayaa u baahan in laga soo dhoofiyo Japan. Muddada amarku badanaa waa 2-3 bilood. Juun 2021 waa amarkii ugu dambeeyay ee Mitsubishi.
Mitsubishi shaashadda LCD ：
Cabir: 3.5 / 4.3 / 5.0 / 5.7 / 6.5 / 7.0 / 8.0 / 8.4 / 9.0 / 10.1 / 10.4 / 12.1 / 15/17/19
Heerkulka: heerkulka shaqada -30 ℃ -80 ℃ / -40 ℃ -85 ℃
Iftiin: 500-2000 lumens
Xagasha aragtida: xagasha daawashada oo buuxda 89/89/89/89
Nolosha: 100,000 saacadood Backlight: WLED
Asal ahaan: Japan
Kyocera shaashadda LCD:
Cabbirka warshadaha 3.5-15.6 inji, cabbirka baabuurta 1.8 / 2.1 / 2.9 / 3.1 inji iyo taxanaha MIP ee shaashadaha awoodda-hooseeya. Sifooyinka taxanaha oo dhan waxay lamid yihiin kuwa shaashadaha Mitsubishi, laakiin cabirka Kyocera ee hadda waa wali 3.5-12.1. Sannadkan, waxay kaloo billowday qeexitaanno 15 iyo 15.6-inji ah. Qiimaha waxaa lala barbardhigayaa qiimaha Taiwan. Qaado jidka dadka u roon. Noocyada buuxa ee Kyocera ee LCD-yada Shaashadaha ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo macaamiisha si loo daboolo baahiyaha hal-ilaa-hal. Shaashadaha Kyocera LCD waxay hadda leeyihiin warshado ku yaal Shiinaha. Muunado ayaa lagu tijaabin karaa shuruudaha mashruuca. Gaarsiinta waxaa lagu buuxin karaa 1 bil gudahood hadii tirada amarku aysan badneyn, tiradooduna waa ilaa 2-3 bilood. Xuduudaha waxqabadka asal ahaan waxay la mid yihiin Mitsubishi, laakiin qiimaha Waa wax ka yar seddex meelood laba meel shaashadda 'Mitsubishi's LCD', taas oo caan ku ah macaamiisha warshadaha.
Cabir: 3.5 / 4.3 / 5.0 / 5.7 / 5.8 / 6.2 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.4 / 9.0 / 10.1 / 10.4 / 12.1 / 15 / 15.6
Heerkulka: heerkulka shaqada -30 ℃ -80 ℃
Iftiin: 500-1500 lumens
Soo koobid: Mitsubishi wuxuu joojinayaa wax soo saarka wax ka yar hal sano. Marka loo barbardhigo Kyocera LCD Mitsubishi Industrial LCD, heerkulka hawlgalka ayaa ka ballaaran, kaas oo ah LCD asal ahaan ka soo jeeda Japan. Shaashadda Kyocera LCD waa shaashad Jabbaan ah, laakiin waxaa lagu soo saaraa Shiinaha oo waxay leedahay faa'iido qiimo leh. Tirada badankood waxay si toos ah u beddeli karaan shaashadaha Mitsubishi. Khadka wax soo saarku sidoo kale waa hodan yahay oo qumman yahay. Waxaa jira xulashooyin badan oo aad ku dooran karto 12.1. Adeeggu sidoo kale waa mid gudaha ah xawaaraha jawaabtuna waa Degdeg, labaduba waxay bixin karaan shaybaarro tijaabo ah xilligan, laakiin waxaa lagu talinayaa in loo doorto Kyocera Screen xulashada mashruuca cusub, Mitsubishi ma sii siin doono wixii ka dambeeya joojinta wax soo saarka.
Waqtiga boostada: Abriil-17-2021
3 / F, Dhismaha 3aad, Jia'anda Industrial Park, Degmada Longhua, Shenzhen, Shiinaha
Hada na soo wac: 18146681518